Kitra – Lalao firahalahiana: tsy mifanara-tsaina ny FMF sy i Nicolas Dupuis - ewa.mg
News - Kitra – Lalao firahalahiana: tsy mifanara-tsaina ny FMF sy i Nicolas Dupuis
Mifanenjana i Nicolas
Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, sy ny federasiona
malagasin’ny baolina kitra (FMF) ny amin’izay ho ekipa hanaovana
lalao firahalahiana. Samy manana ny heviny ny roa
Mananontanona ny mety ho
fahasimbana sy ny fahapotehana indray eo amin’ny baolina kitra
malagasy. Mitranga mantsy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny
federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) sy i Nicolas Dupuis,
mpanazatra ny Barea de Madagascar, ny amin’izay ekipa hanaovana
lalao firahalahiana, hanomanana ny fihaonana mandroso sy miverina
amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fiadian-toerana ho
an’ny “Can 2021”. Samy manana ny ekipa eritreretiny hiatrehana
izany mantsy ny andaniny sy ny ankilany. Miezaka sy misisika mafy
hanaovana lalao firahalahiana amin’ny klioba D1 ao Luxembourg
mantsy ingahy mpanazatra raha ny vaovao voaray. Mitsipaka
marindrano izany kosa ny komity mpitantana eo anivon’ny FMF, izay
efa nifampiraharaha tamin’ny Etalons-n’i Borkina Faso.
Nohamafisin’ny tomponandraikitra iray ao amin’ny federasiona
malagasin’ny baolina kitra fa izy ireo no niresaka mivantana
tamin’i Borkina Faso ary nanao ny fifanarahana rehetra fa tsy i
Nicolas Dupuis velively.
Efa nanaiky ry zareo Borkinabe ny
amin’io lalao io ary tsy mitaky na inona na inona fa ifampizarana
ny fikarakarana ny lalao. Hatao any Lisbonne, Portugal, izany, raha
raikitra satria tsy azo anatanterahana fihaonana ho an’ny
ekipam-pirenena ao Frantsa.
Niteraka resabe izany omaly ka
nahatonga an’i Nicolas Dupuis nanao fanambarana ao amin’ny
tambajotran-tserasera nilaza fa efa niresaka tamin’i Borkina Faso
ihany koa ny tenany ary efa nandefa taratasy any amin’ny FMF,
nampahafantatra izany, ka eo am-piandrasana ny valin-tenin’ity
rafitra miahy ny baolina kitra malagasy ity izy. Marihina fa eo
anelanelan’ny 9 – 14 oktobra, izay datin’ny Fifa, ny hanaovana io
lalao firahalahiana io.
L’article Kitra – Lalao firahalahiana: tsy mifanara-tsaina ny FMF sy i Nicolas Dupuis a été récupéré chez Newsmada.
Hisintona eo amin’ny tontolo politika i Onitiana Realy. Tsy voafetra ny fotoana hiatoany nefa na izany aza, voalaza fa hiompana misimisy kokoa eo amin’ny sehatry ny sosialy sy ny serasera ny tenany manomboka izao, araka ny nambarany. Tsiahivina fa minisitry ny Mponina fony fitondrana Rajaonarimampianina ity mpanao gazety ity. Nitana ny talen’ny fampielezan-kevitry ny kandidàn’ny HVM tamin’ny fifidianana farany teo. Hangina kely eo amin’ny tontolo politika koa Ratsiraka Iarovana Roland. Nambarany tamin’ny mpanao gazety tao Toamasina, ny herinandro teo izany. “Handini-tena kely aloha aho”, hoy izy. Anisan’ireo kandidà 6 voalohany ny tenany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Nilatsaka be, nahazo 0, anefa izy tamin’ity indray mandeha ity. Voalazan’ireo mpikambana MTS fa mety hirotsaka hofidina eny ifotony indray ny tenany. L’article Fantina sy fintina a été récupéré chez Newsmada.
LALAM-PIOFANANA “AUDIOVISUEL ET CINÉMATOGRAPHIE” : E-media irery ihany no nahazo fankatoavana
Sambany teto Madagasikara no nisy nahazo diplaoma momba ny “audiovisuel et cinématographie”. Mizara roa ny e-media ka voalohany amin’izany ny fampianarana ambony hahazoana ny diplaoma licence sy ny master ary fampiofanana arak’asa ny faharoa. Efa nahazo fankatoavana avy amin’ny fanjakana ireo lalam-piofanana ao amin’ny oniversite. Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny 30 novambra 2018 ireo andiany voalohany nahazo ny diplaoma licence. Nisalotra ny anarana “e-mpyrian” ireto andiany ireto. Notontosaina tamin’io fotoana io ihany koa ny fizarana ny mari-pahaizana (certificat de fin de formation et diplôme de technicien supérieur) an’ireo nahavita ny fiofanana arak’asa momba ny sary, ny feo ary ny “web”. “E-taratra” ny anaran’ity andiany faha-enina ity. Raha ny tarehimarika voaray, 294 ny fitambaran’ireo mpianatra nozaraina mari-pahaizana ireo. Nambaran’ny filoha tale jeneralin’ny E-media, Rojo Andrianasolo fa ny e-media irery no mbola nahazo fankatoavana avy amin’ny fanjakana ny lalam-piofanana momba ny “audiovisuel et cinématographie”. Ireto avy ny lalam-piofanana hahazoana diplaoma licence ao amin’ny oniversite E-media: “communication audiovisuelle et numérique”, « marketing publicité et journalisme », « informatique et électronique embarquées ». Ankoatra ny “audiovisuel et cinématographie” dia efa misokatra amin’ny fomba ofisialy ihany koa ny fiofanana hahazoana ny diplaoma master. Lynda A. Cet article LALAM-PIOFANANA “AUDIOVISUEL ET CINÉMATOGRAPHIE” : E-media irery ihany no nahazo fankatoavana est apparu en premier sur déliremadagascar.